Oxytocin analogue carbetocin သည်မော်ဖင်းအကိုက်ရှာဖွေခြင်းကို priming-induced ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ dopaminergic, noradrenergic နှင့် MOPr စနစ်များပါ ၀ င်မှု (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
dopaminergic, noradrenergic နှင့် MOPr စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်မှု (2015): အဆိုပါ oxytocin analogue carbetocin မော်ဖင်းအကိုက်-ရှာ၏ priming-သွေးဆောင် reinstatement ကာကွယ်ပေးသည်
EUR Neuropsychopharmacol ။ 2015 အောက်တိုဘာ 9။ pii: S0924-977X (15) 00310-7 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2015.09.015 ။
Georgiou P ကို1, Zanos P ကို1, Garcia က-မစ္စတာကာမိုနာဂျေအေ2, Hourani S က1, မီးဖိုချောင်ငါ1, Kieffer BL3, Laorden ML2, ဘေလီတစ်ဦးက4.
အဘယ်သူမျှမထိရောက်သော pharmacotherapy ရရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအောက်ပါ abstinence မှ Relapse စွဲ၏ကုသမှုများအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအလယ်ပိုင်း oxytocinergic system ကိုသက်ဝင်စိတ်ခံစားမှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့် opioid ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ကာကွယ်ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ oxytocin analogue carbetocin (CBT) ကြွက်တွေမှာ conditional အရပ်ကို preference ကို (CPP က) ၏မော်ဖင်းအကိုက်-ရစေတယ် reinstatement reverse နိုင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။
CBT ၏အမူအကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှုကိုအလေးအနက်အဆိုပါယန္တရား opioid ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ priming- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ၏ CBT မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အတွက် striatal noradrenergic နှင့် dopaminergic စနစ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကဲဖြတ်များကစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, oxytocin အဲဒီ receptor ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြံပြုခြင်းမကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထား (OTR ကို) -μ-opioid အဲဒီ receptor ဦးနှောက်ထဲမှာ (MOPr) interaction ကပေးသောကျနော်တို့နောက်ထပ် MOPr ချို့တဲ့ကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက် binding OTR ကို autoradiographic ထွက်တင်ဆောင်သဖြင့်ဤအ interaction ကစူးစမ်း.
CBT အုပ်ချုပ်ရေးမော်ဖင်းအကိုက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ Prime-သွေးဆောင် reinstatement တားဆီး။ dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့်အတွက် CBT တစ်ခုစူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှု stress- နှင့်သွေးဆောင် priming reinstatement အောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်နေစဉ်, CBT သိသိသာသာသာ Prime-သွေးဆောင် reinstatement အောက်ပါ striatal noradrenaline လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်လျော့နည်းသွား။ ထိုမှတပါး, OTR ကိုတစ်ဦးသိသာဦးနှောက်ဒေသတိကျတဲ့တိုး binding relapse ၏မော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအရာတခုဖြစ်နိုင်တဲ့ OTR ကို-MOPr အပြန်အလှန်၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်း, MOPr နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤရလဒ်သည် opioid အသုံးပြုမှုမှ relapse ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများအတွက်အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် oxytocinergic စနစ်အားပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် stress- ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့် opioid CPP ကအပြုအမူ၏ reinstatement-သွေးဆောင် priming အတွက် OTR ကိုဆွ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ် monoaminergic စနစ်များ၏ differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။